Africa University Inorasisa Zanu PF?
Mbudzi 15, 2010
Paita ropa rakaipa pakati pevamwe vakuru mu Zanu PF nechikoro chepamusoro soro che Africa University, zvichitevera danho rakatorwa nechikoro ichi rekuti Zanu PF isashandise chikoro ichi pachaitwa musangano webato iri mwedzi unouya.
Pakutanga, vakuru ve Africa University vanonzi vakanga vavimbisa Zanu PF kuti inogona kushandisa chikoro ichi sedzimba dzekugara. Asi vakuru vechikoro ichi vakazoti izvi hazvichaita, izvo zvapa kuti vamwe vakuru muZanu PF, vatsamwe nemaitiro aya.
VaEnock Porusingazi ndivo sachigaro wezvevechidiki mubato reZanu PF mudunhu reManicaland. VaPorusingazi vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa nevakuru vepa-Africa University zvakatsamwisa vakuru vebato ravo zvakanyanya.
VaPoruzingazi vatiwo kuita kwevakuru vepachikoro ichi kunotaridza kuti vari kushandiswa nevamwe venyika dzokumadokero. VaPorusingazi vati Zanu PF yaizosiya yabatsira chikoro ichi nezvakawanda dai vakawanirwa pekugara.
Mukuru anoona nezvekubuda kwemashoko pachikoro che-Africa University, Muzvare Andrea Stevens, havana kuwanikwa kuti tinzwe divi rechikoro ichi panyaya iyi. Mutevedzeri wavo, Sharai Nhondo, audza Studio 7 kuti Muzvare Stevens, avo vasiri pabasa, ndivo chete vanobvumirwa kutaura nevatori venhau.
Zanu PF iri kuitira musangano wayo wepagore rega-rega kuno kwaMutare kutanga musi wa 15 kusvika 17 Zvita. Musangano uyu uchaitirwa paMarymount Teachers’ College. Asi dzimwe nhengo dzeZanu PF dzichange dzichigara muzvikoro zvinoti Mutare Polytechnic, Mutare Teachers’ College nezvimwe zvikoro zvakapoteredza
Nhengo dzeZanu PF dzinovisvika zviuru gumi dziri kutarisirwa kunge dziri maMutare kumusangano uyu, uyo uri kutarisirwa kubuda negwara rekugadzirisa bato iri, zvikuru munyaya dzemabasa ezvematonmgerwo enyika uye mamiriro akaita zvinhu muhurumende yemubatanidzwa, apo nyika yakatarisana nesarudzo.
Musangano wepagore weZanu PF uyu hauitwe sarudzo, kunze kwemusangano we Congress unoitwa makore mashanu ega ega. Asi mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe, vari kutarisirwa kushandisa musangano uyu senzira yekusimbaradza hutungamiri hwavo. Matunhu matatu anoti Mashonaland East, Manicaland, ne Harare, akatobuda pachena kuti vanoda kuti VaMugabe varambe vachitonga bato iri. Madzishe negungano remadzimai muZanu PF, vakapawo rutsigiro rwavo kuna VaMugabe